Vivaldi, ihe nchọgharị chọrọ ka Opera na Metro interface | Site na Linux
Vivaldi, ihe nchọgharị ahụ chọrọ ka Opera na Metro interface
1 Gịnị bụ Vivaldi?
2 Kedu ihe Vivaldi na-ewetara anyị?
3 Nweta Vivaldi
Gịnị bụ Vivaldi?
Otu enyi m kpọbatara m Vivaldi, ihe nchọgharị ọzọ nke a mụrụ na-agbalị imeju oghere ahụ opera hapụrụ ọtụtụ ndị ọrụ, mana dị ka nke ikpeazụ, ọ dịghị ihe ọzọ Google Chrome na arụmọrụ ọhụrụ. N'ezie, ọ bụ ya mere Google Chrome, na ọ bụrụ na anyị na-aga Igbe mbata Anyị ga-ahụ na anyị nwere ike ịbanye na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Mana achọrọ m ịdị aka ike. Nke mbu, a na m anwale ya nwa obere oge, ma o bu eziokwu na o gunyere obere ihe ndi na ato uto, ma odikariri n’ile anya. Mana ka anyị lee ihe bụ akụkọ dị na nyocha a dịka ndị mmepe ya si dị (otu n'ime ndị bidoro Opera n'eziokwu):
Na 1994, ndị mmemme abụọ malitere ịrụ ọrụ na ihe nchọgharị weebụ. Ebumnuche anyị bụ ịme ngwa ngwa ngwa ngwa, nke nwere ike ịrụ ọrụ na akụrụngwa pere mpe, na-eburu n'uche na ndị ọrụ bụ ndị nwere mkpa na ọchịchọ nke ha. Opera mụrụ. Obere ngwanrọ ngwanrọ anyị nwetara traction, ìgwè anyị toro, e mekwara obodo. Anyị nọ ndị ọrụ anyị nso na mgbọrọgwụ anyị. Anyị na-emeziwanye ngwanrọ anyị, dabere na nzaghachi anyị na ndị ọrụ, yana echiche nke anyị banyere otu esi eme ezigbo ihe nchọgharị. Anyị na-achọpụta ihe ma na-agbasi mbọ ike maka ịdị mma.
Ọganihu ngwa ngwa na 2015, anyị hụrụ ihe nchọgharị ahụ n'anya n'agbanyeghị na ọ gbanweela ntụziaka. N'ụzọ dị mwute, ọ naghịzi enye ndị obodo ya ọrụ na ndị nyere aka nyere aka wuo ihe nchọgharị ahụ na mbụ.
Ya mere, anyị ruru nkwubi okwu ebumpụta ụwa: Anyị ga-eme ihe nchọgharị ọhụrụ. Ihe nchọgharị maka anyị na ihe nchọgharị maka ndị enyi anyị. Ihe nchọgharị na-agba ọsọ ọsọ, kamakwa ihe nchọgharị bara ọgaranya na arụmọrụ, na-agbanwe nke ukwuu ma na-etinye onye ọrụ mbụ. Ihe nchọgharị emere maka gị.
Kedu ihe Vivaldi na-ewetara anyị?
Ihe mbụ anyị ga-ahụ bụ interface dị ezigbo nso na ụdị Microsoft's Metro, nke njirimara ya bụ na taabụ (na-arụsi ọrụ ike) nakwe agba nke weebụsaịtị anyị na-eleta. A mara mma dị mma nkọwa n'ezie.
Dị ka ebumnuche bụ iji nwetaghachi ihe furu efu opera, na-eketa nhazi nke ihe ndị ahụ, menus na preview nke taabụ mgbe ha na-atụgharị ya, yana isi menu na ngwa ngwa. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ijikọ taabụ ahụ dị ka ọ dị na mbụ.
Ma a ka nwere ọtụtụ ọrụ a ga-arụ, n'ihi na ọ bụ ezie na akụkụ n'akụkụ ahụ na-arụ ọrụ, akwụkwọ ozi ahụ ka na-emepe, mana ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ: Ibe edokọbara, Ihe edeturu, Nbudata, wdg ... Dịka na nsụgharị ochie nke Opera, obubọk nwere ike zoro kpamkpam ma Speedial na-adị ka nke ochie.
Windo mmasị nwere naanị nhọrọ ziri ezi maka ụdị nke Vivaldi ugbu a, ma nwee obere nkọwa dị iche. N'ezie, ọ naghị edepụta ihe ọ bụla na Mmasị Google Chrome (dị ka a ga - asị na Opera na - eme ugbu a) yana na ụfọdụ isi ọ nwere ihe mbụ.
Agbanyeghi na m gbalịrị ide edemede a na Vivaldi, ihe nchọgharị ahụ nwere nsogbu na WordPress n'ihi na mgbe m gbalịrị iji anya nke uche hụ ihe ngosi, Nchịkwa nchịkwa ahụ na-ebuba na taabụ ọzọ ma ọ bụghị nyocha ahụ n'onwe ya. Mana dịka m kwuru na mbụ, ọ ka nọ n'oge mbido mmepe, yabụ, anyị ga-ama ọkwa maka mbupụta ya.
Vivaldi dị site na ebe nrụọrụ weebụ gị maka nyiwe niile (Windows, Mac na Linux), na nke ikpeazụ na nchịkọta maka Debian na RedHat. Ọ bụrụ na iji ArchLinux, anyị nwere ike iwunye ya site na AUR:
Ma ee, naanị maka 64 Bits site na ihe m nwere ike ịhụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Vivaldi, ihe nchọgharị ahụ chọrọ ka Opera na Metro interface
Ihe 15 kwuru, hapụ nke gị
Ọ dị ezigbo mma, mana enweghị m mmasị na webkit dị ka njin, echere m na ọ na - eche naanị -
Webkit abụrụla onye ndụdụ Google akpọ Blink (nke Opera na-eji ugbu a ebe ụdị 14 pụtara).
ma ntabi bụ nnọọ a version nke webkit kachasị maka chrome. ka a ntabi / webkit naanị
Zaghachi na theguillox
Jhoed ebule dijo
Ruo ugbu a, m na-atụ anya Firefox iji kewaa taabụ ọ bụla n'ime usoro dị iche iche dị ka Webkit na-eme, Firefox <3.
Zaghachi Jhoed Ram
Olile anya na nkpasu iwe adighi eme.
N'ezie ọ dị. https://wiki.mozilla.org/Electrolysis ihe m na-amaghị ma ọ bụrụ na ọ ga-arụ ọrụ na nke ugbu a mbipute n'ihi na ọ bụ ka na ule.
Firefox agabeghị na Blink ma ọ bụ Webkit n'ihi na ntụgharị nsụgharị nke ụlọ ka na-achọ ka achọrọ ya mgbe a bịara igosipụta ibe weebụ yana ụkpụrụ W3C kwadoro.
M gụrụ njikọ ahụ, mana echere m na aghọtaghị m ihe ọ na-ekwu, n'ihi na ọ dị m ka ọ na-ekwu na ọ na-eji naanị otu usoro.
Olileanya ọ dịghị mgbe ọ na-eme! .. nke ahụ bụ ihe na-amasị m banyere firefox! inwe ọtụtụ usoro adịghị mma!
Agbalịrị m ya, ọ dị mma, ma ọ bụrụ na akabeghị aka, mana ọ ga-aka mma. E wezụga nke ahụ, m wụnye ya na nkwado maka Latin American Spanish, mana ọ pụtaghị ịgbanwe asụsụ ahụ.
Ma ọ bụghị ya, ọ dị mma ịmalite.
Maka KaOS, ọ dị na KCP
Site na ọnụ:
Chukwudị ọzọ nke Chromium na-eme Spartan interface? M ka mma ijide Opera Blink 27 (opekata mpe ọ kachasịla ihe oriri ya ruo na nke kachasị na ụdị a).
Enwere m mmetụta Operiptilian, na m hụrụ Vivaldi n'anya, mana ọ ka nọ na mmalite nkebi na n'agbanyeghị enweghị nkwekọrịta, dịka nke ochie presto na agha ya megide Google, ọ nwere ezigbo ihu ... ee, ọsọ ọsọ bụ leeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, Achọrọ m iche na ọ bụ otu "nsogbu-nsogbu" nke opera 11-12 nke ndabara na-atụ anya ka Ibu Ibu dum na peeji ya ise ya
na maka ugbu a ... ha na-elekọta
Mmadu gafere m nkwado Spanish?
Mmadu ga-ama otu esi etinye ya na freebsd? Daalụ 🙂
Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn
Plasma 5.2 dị, ka anyị hụ ihe dị ọhụụ [Emelitere]